खेल्ने हैन पोखरा प्रिमियर लिग ? सुरु भयो खेलाडी दर्ता – WicketNepal
खेल्ने हैन पोखरा प्रिमियर लिग ? सुरु भयो खेलाडी दर्ता
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ आश्विन ३, बुधबार १३:०९
यहि कार्तिक ९ गतेबाट पोखरामा आयोजना हुने पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) को खेलाडी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। खेलाडी दर्ताका लागि अयोजक क्विन्स इभेन्टसले ७ दिनको समय सिमा तोकेको छ।
बुधवार जारि भएको प्रेस बिज्ञप्तिमा बताइए अनुसार पहिलो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग खेल्न इच्छुक खेलाडीले लिगको अधिकारिक वेबसाइट www.ppl-t20.com बाट आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्। खेलाडीका लागि दर्ता शुल्क एक हजार रुपैयाँ राखिएको छ र सो रकम इसेवाबाट बुझाउन सकिने समेत आयोजकले बताएको छ।
प्रतियोगिताको नियम अनुसार सहभागी प्रत्येक टोलीले आफ्नो स्क्वाडमा १५-१८ खेलाडीलाई समावेश गराउनु पर्नेछ। जस्मध्ये न्यूनतम १० खेलाडीको छनौट अक्सन मार्फत हुनेछ भने हरेक टोलीमा १ मार्की खेलाडी, २ बिदेशी खेलाडी र २ स्थानीय खेलाडीलाई ” लोकल आइकन ” का रुपमा टोलीमा लिनु पर्नेछ।
प्रतियोगितामा नाम दर्ता गराउने खेलाडीहरुलाई ३ समुहमा विभाजन गरिने छ। पहिलो समुहमा क्याप्ड सिनियर, दोस्रो समुहमा क्याप्ड एज लेभेल र तेस्रो समुहमा अनक्याप्ड खेलाडी रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।
क्याप्ड सिनियरको सुचीमा नेपाली सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका खेलाडीलाई राखिने छ। यस समुह अन्तर्गत पर्ने प्रत्येक खेलाडीको न्युनतम मुल्य ५० हजार रुपैयाँ रहनेछ भने अधिकतम मूल्य २ लाख ५० हजारसम्म रहने छ।
यस्तै क्याप्ड एज लेभलको सुचिमा नेपाली टोलीबाट यु-१५, यु-१७, यु-१९, यु-२१ र यु-२३ खेलेका खेलाडीहरु रहने छन्। यस समुहमा रहने खेलाडीको न्युनतम मूल्य ५० हजारबाट सुरु भएर अधिकतम मुल्य १ लाख ५० हजारसम्म पुग्नेछ।
अनक्याप्ड समुहमा भने नेपाली सिनियर राष्ट्रिय टोलि र उमेर समुहको टोलीबाट नखेलेका अन्य खेलाडीलाई समावेश गरिएको छ। यस सुचिमा रहने खेलाडीको मूल्यभने न्युनतम ३० हजारबाट अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म रहनेछ।
यदि कुनै खेलाडीले आफ्नो न्युनतम मूल्य बढाएर नाम दर्ता गराउन चाहे त्यसको समेत व्यवस्था रहेको आयोजकले बताएको छ। सो प्रक्रियाका लागि प्रतियोगिताको आधिकारिक वेबसाइटमा छुट्टै बिकल्प रहेको छ।
यही कार्तिक ९ देखि २० गते सम्म पोखरामा आयोजना हुने पोखरा प्रिमियर लिग प्रतियोगिताको ब्रोडकाष्टिङ पार्टनरका रुपमा केहि दिन अघि मात्र हिमालय टिभी एचडीसंग सम्झौता भएको थियो। सो क्रममा बताइए अनुसार खेलाडी अक्सनको प्रशारण समेत टेलिभिजनले गर्नेछ। हालसम्म लिग खेल्ने टिमहरुको घोषणा भने भएको छैन।